Maxaad u baahan tahay inaad barato si aad u noqoto kalkaaliye caafimaad? | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 30/11/2021 23:51 | Daraasado
Maxaad u baahan tahay inaad barato si aad u noqoto kalkaaliye caafimaad maanta? Xirfadlayaasha ka shaqeeya waaxda caafimaadka waxay qabtaan shaqada muhiimka ah ee bulshada dhexdeeda. Ladnaanta ayaa fure u ah horumarinta tayada nolosha ee marxaladaha kala duwan ee jiritaanka. Si kastaba ha ahaatee, cudurku wuxuu sidoo kale ka soo muuqan karaa nolosha aadanaha. Xaaladdaas, ogaanshaha saxda ah ayaa lagama maarmaan u ah in la sameeyo daaweyn habboon. Bukaanku wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah.
1 U baro Shahaadada Kalkaaliyaha shakhsi ahaan ama meel fog
2 Maxaa la bartaa si looga shaqeeyo maadada waxbaridda kalkaalisada ahaan?
U baro Shahaadada Kalkaaliyaha shakhsi ahaan ama meel fog
Qaybta kalkaalisada waxay bixisaa fursado shaqo oo badan waxayna maanta aad ugu baahan tahay. Muxuu baranayaa xirfadlaha doonaya inuu xirfaddiisa ku hormariyo maaddadan? Shahaadada Kalkaalisada waxay bixisaa diyaarinta lagama maarmaanka ah si loo helo kartida, xirfadaha iyo aqoonta.
Jaamacado badan ayaa shahaadadan ku dara barnaamijkooda waxbarasho. Si kastaba ha ahaatee, waa in la tilmaamaa in wixii ka baxsan bixinta qof ahaan wax loo baro, ay sidoo kale jiraan hindiseyaal isku daraya tababarka internetka iyo layliyo. Layliyo waa lama huraan si loo ogaado ku dhaqanka mihnadda shaqada maalinlaha ah, iyada oo loo marayo daryeelka bukaanka tooska ah iyo iskaashiga kooxda ee asxaabta kale. Ciwaanka isku dhafan tababarka khadka tooska ah Iyadoo la ogaaday dhaqamada ka jira machad ay si gaar ah u qiimeeyaan ardayda, duruufaha kala duwan dartood, aan tagi karin fasallo fool ka fool ah.
Habka waxbarasho ee kuwa raba in ay ka shaqeeyaan goobta kalkaalinta waxay kordhin kartaa in ka badan dhamaystirka shahaadada. Tani waxay dhacdaa marka xirfadlaha uu rabo inuu boos ka helo mucaaradka iyo, si loo gaaro ujeeddada la tilmaamay, wuxuu dejiyaa jadwal macquul ah si uu u eego ajandaha. Anshaxan oo ka mid ah qaybta caafimaadka waxay sidoo kale bixisaa fursado shaqo oo kale. Sababtan awgeed, ardayda qaarkood waxay raadiyaan beddelka shahaadadii hore loo kashifay. Xaaladdaas, waxaa suurtagal ah in la dhammaystiro wareegga kaaliyaha kalkaalinta. Shahaado xirfadeed oo waliba soo bandhigta shaqo helitaan heer sare ah maanta.
Maxaa la bartaa si looga shaqeeyo maadada waxbaridda kalkaalisada ahaan?
Xirfadda xirfadeed ee kuwa isku diyaarinaya inay noqdaan kalkaaliye caafimaad waxay sidoo kale la xiriiri karaan goobta waxbarashada. Qofka leh aqoonta lagama maarmaanka u ah inuu maaddo ku baro cutub gaar ah wuxuu u raaci karaa ardayda kale habka waxbarashadooda. Si kastaba ha ahaatee, qofka doonaya inuu u shaqeeyo macalinimo waa inuu sidoo kale isu diyaariyaa inuu noqdo macalin. Dariiqa aynu qaadno markaa? Shahaadada Kalkaaliyaha waa in lagu dhamaystiraa dhamaystirka Shahaadada Masterka ee Jaamacadda Shaqaalaha Macalimiinta Waxbarashada Sare. Kahor intaan la helin magaca la sheegay, ardaydu waxay qaateen CAP.
Shaqada kalkaalisada waxaa weheliya qiimaha xirfadda. Xirfadlayaasha ugu fiican waa kuwa shaqadan u guta si xirfadaysan. Sababtan awgeed, tababarka joogtada ahi wuxuu sidoo kale kor u qaadaa heerka ugu sarreeya ee horumarinta shaqada. Caqliga shucuurtu waa mid ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan ee dhinaca caafimaadka. Xirfadlayaasha ka shaqeeya xiriirka tooska ah ee bukaanada waxay gudbiyaan macluumaadka la xiriira xaaladdooda iyo horumarkooda. Laakin, dhankeeda, way raacaan, hagaan oo waxay bixiyaan raaxo. Sababtan awgeed, ereyada iyo isgaadhsiinta caddayntu waxay sidoo kale soo saaraan saameyn daweyn ah oo ku saabsan niyadda kuwa u xanuunsanaya sabab qaar ka mid ah.
Maxaad u baahan tahay inaad barato si aad u noqoto kalkaaliye caafimaad? Sidaad ogtahay, waa xirfad ay ku jiraan takhasusyo kala duwan. Sidaa darteed, waxaad qiimeyn kartaa jaangooyooyinka kala duwan si aad u horumariso qorshe shakhsiyeed kaas oo kuu soo dhaweynaya yoolka aad rabto inaad gaarto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Daraasado » Maxaad u baahan tahay inaad barato si aad u noqoto kalkaaliye caafimaad?
Waa maxay barbaarinta daweynta?